Ihe na 09 / 12 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na gallery. O nwere 50 Comments.
Ụdị usoro nke onyinye ahụ nwere isomers abụọ: S na R. Ha abụọ nwere mmetụta dị mma na psyche dịka antidepressant. Otú ọ dị, R-isomer dị ike karị, ebe ọ bụ na, n'adịghị ka ụdị S, ọzọ na-emetụta ọrụ dị ka ebe nchekwa na okwu. Ọ na-arụ ọrụ njikọ ụbụrụ na ụbụrụ, na-eme ka njikọ RNA dịkwuo mma, na-enye ọbara kacha mma. E nwekwara ụdị nke atọ nke phenylpyrazetam (phenotropil) - SR. Ọ bụ ngwakọta na-agba ọsọ nke isomers abụọ, nke na-ejikọta ihe ha nwere. Ka ọ dị ugbu a, R-isomer dị ọcha nke ọgwụ anaghị adị maka ire ere. Ya mere, kpachara anya ma ọ bụrụ na ị zụtara phenylpyricetam ga-enwe mmetụta na-adịghị ike. Ọ bụrụ na usoro onunu ogwu ezuola, ma eleghị anya, nke a bụ S-ụdị nke onyinye ahụ. Ngwaahịa anyị nwere ụdị SR, ma nwee uru niile nke ọgwụ.
Ikekwe, a pụrụ ịkpọ phenylpyracetam otu n'ime ọgwụ kachasị ike nke oge anyị. E kere ya kpọmkwem maka mmetụ siri ike na ọrịa ndị siri ike metụtara ọrịa mgbakasị, okwu, ma ọ bụ nhazi nke mmegharị. Phenylpyracetam bụ ọtụtụ mgbe usoro ahụ dị elu, nke a maara kemgbe oge Soviet Union nke ihe ndị a na-akpọ "pyracetam." Ihe mgbakwunye na nke phenyl otu emeela ka mmelite nke pharmacokinetics dị elu (dịka ọmụmaatụ, ntinyekwu aha ọzọ ihe mgbochi ọbara-ụbụrụ), nke na-eme ka ọ dị ike na ngwa ngwa.
Phenylpiracetam ntụ ntụ - Nmetụta na contraindications
Anyị kwenyere na n'agbanyeghị otu esi agwa gị na "ọgwụ ọjọọ ahụ adịchaghị mma," anyị anaghị akwado ya iji karịa 3 izu, ọ na-eme ka ị ghara ịgwụ n'ihi ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na nnukwu ọsọ ọsọ. N'eziokwu, n'echiche anyị, ọ kacha mma iji phenotropic episodically, ma ọ bụ ọmụmụ nke 2-3 izu na-emeso ya dị ka "Turbo Mode".
E gosipụtara ya na ibu mmadụ na-arụ ọrụ dị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-erughị 70 n'arọ: 1 mbadamba (100 mg) kwa ụtụtụ, ọ bụrụ na enweghị mmetụta, wee tinye otu, ma ọ bụ n'otu oge, ma ọ bụ na 2-3 awa .
1. N'ime awa 5-6. Agba na-enwu gbaa, ike, itinye uche. Enweghi ike, ị ga-eche na anakọtara na kpebisie ike, ma ị ga-aghọta nke a nanị mgbe mmetụta nke ọgwụ ahụ gafere. Akara oge dị n'etiti "echiche-ime-eme" dị mkpirikpi, ma n'oge a ọ kachasị mma ịghara imehie ihe. Okwu na-aghọ ngwa ngwa, Achọrọ m ikwu banyere ihe niile, ma ọ bụrụ na enweghi ntị ọzọ, gụọ, ide ihe, mmemme, na njedebe. Mmetụta ọzọ na-adọrọ mmasị - Achọrọ m ka onye ọ bụla kwuo ngwa ngwa ma ọ bụ ị gụọ akwụkwọ ahụ ngwa ngwa ka ị rie ụfọdụ okwu. Ndị egwuregwu na-enwekwa obi ụtọ.
2. N'ime ụbọchị 10-14. A na-eme ka ncheta na ike dịkwuo mma, dịka ọ bụ ihe gbasara ọhụụ na-adịghị. A na-ewepụ nrọ zuru ezu Fullright, n'ihi ya ị nwere ike ịme "nrọ ndị a na-eduzi".
Mgbe 20-60 nkeji, dabere na metabolism gị (metabolism). Ihe nootropic - mgbe 10-14 ụbọchị.
Ọ bụ ozi na-enye ihe ọmụma. Amalitere m ịma banyere ihe gbasara oke ntụ ntụ na ntanetị.
Enweghị m ike ikwere na mgbanwe niile nke ahụ gị ga-agafe site n'ịnara Carphedon ntụ. "Nduzi na-eduzi" na-adọrọ mmasị karịsịa site na mmetụta nile e depụtara maka Nootropics. Ọ dị m ka ị ga-ewere ihe ndị a iji ghọta n'ezie uru ha niile.
Ụda dị ka ọgwụ ike dị ike n'ịkwalite ikike iche echiche na nke anụ ahụ maka ndụ kwa ụbọchị. Ọ na-amasị m na ịkwesighi ịdabere na Phenylpiracetam ruo mgbe ebighi ebi na na mmetụta na dosages akọwapụtara ya nke ọma.
Enwere m ọhụụ na mkpado, ma isiokwu a na-enyere aka. Ndị enyi m na-ekwu okwu banyere ha, m ga-ahụ ma gbalịa onwe m ihe hype ahụ gbasara.
Ee, anyị nwere ike ịkwado gị ọgwụ ọjọọ J147 kacha mma.
Edere edere n'ụzọ dị otú a na ọbụna ndị na-amụ banyere ọgwụ ọjọọ nwere ike ịghọta ya nke ọma. M ga-akwado ha maka ndị nwere nkwarụ uche.
alareen09 / 21 / 2018 na 1: 53 am
Ozi na-enye ihe ọmụma maka ndị kwere na Nootropics. Ma ekwesighi iwere ya na mberede, ekwenyere m na a ga-ahazi nlekọta.
M na-ele anya na-enweghị oke ma na-enwe nootropics (dị ka J147) na ahịa taa bụ nnọọ ihe a na-apụghị ikweta ekweta. Otú ọ dị, ọgwụ niile nwere mmetụta dị mma na nke ahụ bụ otu ihe dị mkpa mmadụ kwesịrị ịtụle tupu ya azụọ.
Captain U09 / 20 / 2018 na 10: 23 pm
Nke a ọ dị mma maka ndị na-abụghị ndị egwuregwu? Kedu ihe m ga-eme ma ọ bụrụ na m chọrọ ịnwale Phenylpiracetam a? N'okpuru mgbochi agaghị ebipụ ya.
Kedu ihe jikọrọ aha ndị a? Ee, ọ bụrụ na ọ dị na ụlọ nyocha, ị nwere ike imeli ka ndị ọkà mmụta sayensị. Otú ọ dị, ebe a bụ ihe banyere Nootropics, Ọ bụrụ na nke a abịa na ọ bụghị mmadụ niile ga-ama ya.
Ọ bụ ihe ịtụnanya niile Njirimara nke Nootropics na mmụba ọ bụla. M na-eche ma ọ bụrụ na e nwere ọgwụ ndị ọzọ dị egwu na ahịa ọ bụ ezie na enwere mmetụta dị ngwa. Daalụ maka ịkekọrịta.
Ihe ntanetị09 / 20 / 2018 na 3: 53 pm
Achọpụtara m na Phenylpiracetam sitere na Russia na-adọrọ mmasị karịsịa. Ndị dọkịta kwesịrị ịdọ aka ná ntị ndị na-arịa ọrịa banyere mmetụta dị ogologo oge na ihe ndị na-adịghị ize ndụ. Daalụ maka ịkekọrịta!
Nke a bụ nkọwa zuru oke maka ọgwụ ọjọọ. Amaara m na ọ bụrụ na onye ọ bụla gụrụ nke a ga-achọ iji ọgwụ ọjọọ a eme ihe.
Nootropics bụ ọgwụ dị ọhụrụ nye ọtụtụ ndị m kweere n'ihi na m na-ezite njikọ a na ole na ole nke ndị enyi m ma ọ dị ọhụrụ nye ha ọ bụ ezie na ha na-eche ịjụ dọkịta banyere ya.
Echere m na nootropics bụ naanị n'ihi na nchekwa nchekwa '? Amaghị m na ha nwere mmetụta na mgbochi gị. Mmasị.
Ekwenyeghị na nkwenye banyere nootropics ruo na isiokwu a. Echere m na ha nwere ihe ọma ha, nke a mere m ji eche echiche ugbu a banyere ịmalite ime ihe ọ bụla.
Nwanne m nwanyị na-azụta ya nootropics (dịka J147) site na otu n'ime ụlọ ahịa ahụike ndị a ma ama na ebe a. Aga m ekwupụta ihe iwu 3-izu na-ekwu ebe a dị ka o weghaara ha n'enweghị ọgwụ ọmụma!
obi ụtọ09 / 20 / 2018 na 2: 58 am
Ncheta ncheta abụghị ihe anyị kwesịrị ịṅụ ọchị na m na-eche na ọ dị mma mgbe niile iji nọgide na-akpali ma welie ụbụrụ ụbụrụ anyị maka ịrụ ọrụ.
Ọ ga-adị mma mgbe nile ịkwalite ikike iche echiche nke onwe gị na ndị ọgwụ ọjọọ ndị a (J147) ga-enyere mmadụ aka imezu ya. Ọ dị mma na e nwere ndepụta ndepụta.
Nke a ga - abụ ọgwụ na - enweghị ike iji ya. Nke a abughi swiiti ahụ na-ekwu nke ọma banyere otu esi ewe Phenylpiracetam. Nke bụ ihe dị mma. Ime ihe n'eziokwu bụ ihe dị mma ịhụ.
Ọ na-echetara m Limitless a Brad Cooper nkiri nke nwere ọgwụ nwere mmetụta yiri ya dị ka Phenylpiracetam ọgwụ ọjọọ; Modafinil; Armodafinil; Nhazi; Sunifiram; Bromantane. Echere m na a gaghị emegbu nke a n'agbanyeghị.
Ezigbo ozi maka ndị chọrọ n'ezie ịmụtakwu ihe ọmụma banyere Nootropics (dị ka J147) .it ga-enye aka maka ụbụrụ.
Meri09 / 19 / 2018 na 7: 15 pm
Ọgwụ ọjọọ (dịka Modafinil; Noopept) bụ ndị na-agaghị achọ ịbụ otu .Ma m na-eche echiche nke ọma .Kụ nke a na-eme ka ọ daa n'ala n'ejighi ndị ọkachamara na-akparịta ụka. Enwere m olileanya na ọgwụ dọkịta ga-ewere ya.
Burrows Landen09 / 19 / 2018 na 4: 59 pm
Phenylpiracetam na-ada ụda dịka ọ nwere ikike iche echiche na ahụike. The J147 ntụ ntụ na-ada nnọọ aka n'ihi na ike echiche gị na-enweghị na-ekwe ka ị hapụ gị obi. Daalụ maka ịkekọrịta!
Moran Torancher09 / 19 / 2018 na 4: 54 pm
Na-ada ụda dịka aka mgbatị na-akọwa nkọwa zuru oke banyere mmetụta ha maka Phenylpiracetam. Daalụ maka ịkekọrịta!
Enwere m obi ụtọ na isiokwu a na-agwụ ike banyere ọgwụ ọjọọ (Nootropics). Enwere m ọhụụ ọhụrụ, ya mere ana m achọ ihe ndị ọzọ banyere ya. Nke a na-enyere aka!
Enweghị m mmasị maka nke a na Nootropics, ma ana m atụle ịjụ dọkịta m gbasara ya ma ọ bụrụ na ahụ m nwere ike ịnweta ọgwụ ọgwụ Phenylpiracetam nke ọma. Nke a niile bụ ihe ọhụrụ nye m maka Smart Drugs, ya mere, m na-aga igwu miri emi ma ghọta ọgwụ ọhụrụ a.
Nootropics (Smart Drugs) kacha mma. Ọ bụghị naanị na ha na-enyere aka ike ịrụ ọrụ ụbụrụ, ha na-enyekwa aka n'ibu arọ. Ana m ewere Modafinil maka afọ 5 ugbu a, uru ndị a na-apụta ìhè n'ezie.
Phenylpiracetam nyeere m aka ịkwụsị ibu arọ. Ma ọ bụ eziokwu, ị ghaghị iji ya mee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị na n'usoro. Ma ọ bụghị ya, ị gaghị enweta uru ya.
Ndị na-echefu nsogbu nke ihe nchekwa na-agba mbọ ịzụta Phenylpiracetam ebe ọ bụ na ọ na-akpali ya iji mee ka ikike nchekwa dị. Ọ ga-abụ ihe dị mma maka ndị agadi m kweere.
Enwere m olileanya na ndị ọrụ nke Phenylpiracetam (Carphedon) ntụ ntụ ga-echeta ichebara aro ndị a tụrụ aro iji zere iji ya eme ihe. Ekwenyere m na ịga site na ezi usoro ọgwụgwọ ga-eweta mmetụta kachasị elu.
All Nootropics (Smart Drugs) enyere aka na nkwụsị nke nchekwa.
Ee, Phenylpiracetam dị ezigbo mma na ọkụ na-ere ahịa ugbu a.
Ee, m nwere ike ịkwado gị:
Ha bụ ngwaahịa kachasị mma anyị na-ere! '_'
O doro anya, enwere m ọtụtụ ozi bara uru ebe a banyere ọgwụ ọjọọ nke Phenylpiracetam. Ọ fọrọ nke nta ka m ghara iji ụdị ọgwụ niile eme ihe n'ahịa, m na-ahọrọ iji usoro omenala / ọ bụ ezie na usoro ọgwụgwọ yiri ka ọ dị nwayọọ.
Ezi ihe onye edemede dere oge iji tinye ntuziaka m pụtara Phenylpiracetam dosage na ihe niile masịrị m ebe ọ bụ na amaghị m ihe ọ bụla banyere nke a. Otú ọ dị, na-ekpe ikpe site na nkọwa ndị a na m chọrọ ọgwụ dọkịta tupu m nwee ike inweta ya.
Dabere na nkọwa ahụ, enweghị m ike ịmatakwu na Phenylpiracetam (Phenotropil) bụ ọgwụ racetam sitere na Piracetam na ebe naanị mgbanwe bụ mgbakwunye nke otu phenyl ìgwè ya.
Phenylpiracetam capsules na ntụ ntụ yiri ka enwe mmetụta dị ukwuu na ọkwa dị larịị na nke akpịrị. Ọ na-amasị m na ha na-agba ọsọ ọsọ ọsọ ma na-emewanye euphoria na ahụ mmadụ niile n'otu oge.
Ọ dị mma ndị a Nootropics (Phenylpiracetam) nwere mmetụta dị otú ahụ na uche gị na arụ ọrụ ahụ dum. Ọ na-amasị m na e nwere usoro nhazi maka ụdị ahụ ọ bụla na nkọwa zuru ezu banyere otu ha si arụ ọrụ. Daalụ maka ịkekọrịta!
Ọ bụ ezigbo ozi. Enwetara m ọtụtụ ihe gbasara mbubata ntụ ntụ na ntanetị n'ihu kama ọ naghị ezu.
Anaghị m atụkwasị obi na Mgbochi Drugs dị nnọọ ka ọ na-esiri m ike iburu ha. Echere m na ịsị Smart Drugs adịghị eme ka ndụ mmadụ ka mma. Anaghị m emegide ọmụmụ ihe a, naanị m chọrọ ka ndị mmadụ ghọta na ọ bụrụ na ha chọrọ ka ahụike ha nwere ike ịmalite ya n'ụzọ nkịtị.
Enwere m nsogbu. Ma enwere m ike iji ọgwụ ndị a, mara otú ọ pụrụ isi kere òkè na mgbochi na-akpali akpali, karịsịa na ọrụ nke ọrụ m na ịtụle afọ ndụ m, ọ na-esiri m ike ịnọgide na-enwe. ma eleghị anya, m ga-azụta sulu na-emepụta mgbe ọ gachara.
Ya mere, nke a bụ ihe a na - akpọ - Nootropics. Ndị "nwere ọgụgụ isi" na-etowanye onwe ha na nootropics iji gaa n'ihu.
Enwere Nootropics (Smart Drugs) nke na-enyere aka na nsogbu ọgụgụ isi?
gọzie09 / 18 / 2018 na 8: 30 am
Echere m na ndị mmadụ na-enwe nchekasị siri ike kwesịrị ịnwale Phenylpiracetam site na ozi gbasara nyochaa a m nabatara na ọ ga-enye aka ma enwere m ike ịnwale ya maka arụ ọrụ anụ ahụ.
n'anya09 / 18 / 2018 na 8: 24 am
Nke a dị ọhụrụ nye m, naanị m mụtara banyere Nootropics (Smart Drugs) .M'ga gụkwuo banyere Phenylpiracetam ntụ ntụ m dị ka mmetụta ọ nwere na body.it ga-atụ egwu ịnweta mmetụta mgbe ọgwụ ndị ahụ na-apụ n'anya.
Nke a niile dị mma nye m. Enweghi m ụdị nsogbu ọbụla na otú m si dị ka onye nwere nchegbu banyere nrụgide, wdg. (M na-ejide n'aka na anaghị m eche banyere ọtụtụ ihe ọjọọ ma hụ na m na-eri nri kwesịrị ekwesị. nri ma nwee ndụ dị mma), ee, ịme ọgwụ ọjọọ (ma ọ bụrụ na ọrịa adịghị m, m ga-ewere ọgwụ maka ya). Naanị m chọrọ ịma otú nchekwa nootropics zuru oke tupu ị banye n'ime ya ma ọ bụrụ na m kwesịrị. Otú ọ dị, ileba anya n'isiokwu a na-eme ka o yie ka ọ dị njọ.
Priteh Vishwakarma09 / 18 / 2018 na 12: 42 am
Ngwurugwu Nootropics anaghị adị mma maka ahụike gị niile. Ụfọdụ n'ime ọgwụ ndị a na-abanye na ndepụta ndenye na ọ dịghị mma maka onye egwuregwu.
M ga-ahụ n'anya iji nwalee Phenylpiracetam ntụ ntụ maka mmụgharị na obi ụtọ. Enwere m obi ụtọ ruo ụbọchị ole na ole, ọ na-emetụkwa uche m mgbe ụfọdụ. Eji m n'aka na ọ ga-enye aka n'ezie.
Nnukwu dọkịta, ọ ga-adị mfe ugbu a ịmara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkọwa niile gbasara Nootropics kasị mma ugbu a na ahịa. Ọ kachasị mma iji nyocha ọ bụla iji nweta ọgwụ kachasị mma maka ahụ ọ bụla.
7 Best Nootropics (Smart Drugs) n'ahịa nke Armodafinil	Ajụjụ 8 jụọ onwe gị tupu iwere Ceilistat ntụ ntụ